साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजारमा रेकर्ड कायम भएको छ।
दुई दिनपछि बढ्यो शेयर बजार
दुई दिन दोहोरो अंकले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार ५५.७६ अंकले बढेको छ।
शेयर बजारमा चार रेकर्ड, परिसूचक २८५० पुगेर फर्कियो
सोमबार शेयर बजारको इतिहासमा चार रेकर्ड कायम भएका छन्।
नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजारमा रेकर्ड कायम भएको छ।
शेयर बजारलाई कस्ने राष्ट्र ब्यांकको संकेत, धितो राखिने शेयरको औसत मूल्य गणनाको विधि फेरियो
दुई दिन लगातार घटेको नेप्सेमा आज उछाल दुई दिन लगातार उच्च अंकले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज भने उछाल आएको छ।
लगातार दोस्रो दिन शेयर बजारमा ठूलो गिरावट शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार ६५.५८ अंकले घटेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको तयारीको चर्चासँगै लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदा नेप्से परिसूचक २.५५ प्रतिशत घटेर २ हजार ५०६ बिन्दुमा ओर्लिएको हो।
नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा शेयर बजार परिसूचक नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार परिसूचक २५.७१ अंकले बढेर २ हजार ६५७.७१ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो।
शेयर बजारमा उत्साह, नेप्से परिसूचकमा ९२ अंकको छलाङ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले शेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने कुनै नीतिगत व्यवस्था अघि नसारेपछि हौसिएका लगानीकर्ताका कारण सोमबार शेयर बजार फराकिलो अंकले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से ९२.४२ अंकले बढेर २ हजार ५८६ विन्दुमा पुगेको छ।
मध्यमवर्ग किन तानिए शेयर बजारमा ? अधिकांश नेपालीका लागि अनजान रहँदै आएको शेयर बजार मध्यम वर्गको कौतूहल, आकर्षण र अवसरको केन्द्र बन्न थालेको छ। देशको अर्थतन्त्र थला परेका वेला शेयर बजारले किन चमक पाइरहेको छ? अहिलेको अभूतपूर्व छलाङ कति जोखिमपूर्ण छ? यी विषय नबुझी लगानी गर्दा ‘मूल्यपासो’मा पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
पिपुल्स हाइड्रोले ८२ लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्ने, सानिमा क्यापिटललाई तोक्यो बिक्री प्रबन्धक लमजुङमा ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको पिपुल्स हाइड्रोले ८२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर (आइपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ।
२ माघदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्यांकको आईपीओ आउने, आवेदन दिने सबैले शेयर पाउने २ माघदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्यांकको सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) आउने भएको छ। यो ब्यांकको आईपीओ नेपाली पूँजी बजारको इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो हुने भएको छ।
शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, नेप्से ८८ दशमलव १२ अंकले बढ्यो आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से परिसूचक ४ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् ८८ दशमलव १२ अंकले बढेर २ हजार १७५ दशमलव ३९ विन्दुमा बन्द भएको छ।
ब्रोकर कमिसन ३३ देखि ६० प्रतिशतसम्मले घट्यो, आइतबारदेखि लागू हुने धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क (कमिसन) ३३ देखि ६० प्रतिशतसम्मले घटाएको छ। धितोपत्र बोर्डले १२ पुसदेखि लागू हुनेगरी घटाएको यस्तो कमिसनमा धितोपत्र बजारको सुधार तथा विकासमा सहयोगी हुने बोर्डले जाकारी दिएको छ।
एक सातामा ब्रोकर कमिसन घट्ने, स्टक डिलरले लाइसेन्स पाउने धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक साताभित्र ब्रोकर कमिसन घटाउने र स्टक डिलर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भएको छ ।
राजनीतिक अन्योलका बीच शेयर बजारमा उछाल
शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मंगलबार उछाल आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएपनि शेयर बजारले लगानीकर्ताको उत्साहलाई कायम राखेको देखिएको छ।
प्रभु लाइफको आईपीओमा अहिलेसम्मकै धेरै आवेदन, मेरो शेयरबाट मात्रै नौ लाखले शेयर भरे
सिआस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन शुरू भएपनि ३ वर्षमा सबैभन्दा बढी आवेदन प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा परेको छ। मेरो शेयरबाट मात्रै पाँच दिनमा कुल आवेदनमध्ये ८३ प्रतिशत आवेदन परेको छ।
राजनीतिक अनिश्चयको छायाँ शेयर बजारमा, नेप्से एकै दिन झण्डै १०० अंकले घट्यो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै शेयर बजारमा डरलाग्दो पहिरो गएको छ। राजनीतिक अनिश्चय बढेसँगै लगानीकर्ताहरू निराश हुँदा आइतबार बजार ४.२५ प्रतिशतले घटेको हो।
प्रधानमन्त्रीको कदमपछि शेयर बजारमा निराशा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेसँगै शेयर बजार ओरालो दिशामा गएको छ। राजनीतिक अनिश्चय बढेसँगै लगानीकर्ताहरू निराश हुँदा बजार घटेको हो।
ब्रोकर कमिसन घटाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजी बजारको विभिन्न पक्षलाई मध्यनजर राखी ब्रोकर कमिसन घटाउन निर्देशन दिएका छन्।
राजनीतिक अनिश्चय र कर्जामा कडाईले शेयर बजार ओरालोमा शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहीबार २२.७० अंकले घटेको छ। राष्ट्र ब्यांकको कर्जा नीतिमा संसोधन तथा राजनीतिक अनिश्चयका कारण लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएपछि नेप्से परिसूचक २ हजार ३२ विन्दुमा ओर्लिएको हो।
किन घट्यो शेयर बजार ? लगानीकर्ता भन्छन्- नियामक निकायले नै अत्याए आइतबार एकै दिनमा शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाए। लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजारका लगानीकर्ता अत्याउन नियामक निकायहरु प्रयोग हुँदा बजार घटेको आरोप लगाएका छन्।
शेयर बजारमा एकै दिन लगानीकर्ताको रू. १ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड गुम्यो शेयर बजारमा लगानीकर्ताले आइतबार एकै दिनमा रू. १ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड २३ लाख गुमाएका छन्। बजारमा व्यापक गिरावट आएपछि लगानीकर्ताहरूको सम्पत्तिको मूल्य एकै दिनमा ह्वात्तै तल ओर्लिएको हो।
शेयर बजारमा ‘पहिरो’, १२३ अंकले घट्यो नेप्से शेयर बजारमा आइतबार भारी गिरावाट आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से १२३ अंकले घटेर १ हजार ९३२ अंकमा ओर्लिएको छ। ६ प्रतिशतले बजार घटेपछि कारोबार समयसीमा भन्दा अगाडि नै बजार बन्द भएको थियो।
नेप्सेमा आज नयाँ रेकर्ड कायम, सात अर्ब माथिको कारोबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। लगातार नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको नेप्सेमा आज पनि ७१ अङ्कको वृद्धि देखिएको हो। नेप्से र कारोबार रकम समेत आज नयाँ विन्दुमा पुगेको मात्रै छैन, नयाँ रेकर्ड पनि कायम भएको छ।
नेप्सेमा झिनो वृद्धि, कारोवार रकम सात अर्ब लगातार दोहोरो अङ्कको वृद्धि तथा कारोवार रकममा समेत नयाँनयाँ कीर्तिमान कायम गरेको शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने झिनो अङ्कले मात्रै उकालो लागेको छ।
किन यसरी बढ्यो शेयर बजारको रौनक ? अर्थतन्त्रमा निराशाकाबीच के कारण छ जसले बजारलाई चम्किलो बनाइरहेको छ ? बजारका लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरू एक मात्र होइन, धेरै कारणले बजारमा छलाङ आएको अनुमान गर्छन्।
शेयर बजारमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड, एकै दिनमा सवा नौ अर्ब रूपैयाँको कारोबार शेयर बजारमा आज फेरि अर्को नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर बजारमा आइतबार अहिलेसम्मकै धेरै रू. ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ। गत बिहीबार पनि नेप्सेमा रू‍. ७ अर्ब ६१ करोडको कारोबार भएको थियो।
आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से झण्डै ६५ अंकले बढ्यो शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से झण्डै ६५ अंकले बढेको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेप्से परिसूचक ६४ दशमलव ७० अंकले बढेर १ हजार ८ सय ७४ दशमलव ८१ अंकमा बन्द भएको छ।
शेयर बजार कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड, आइतबार ६ अर्ब ९० करोडको कारोबार शेयर बजारमा आइतबार कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। पछिल्लो समय लगातार बढ्दै गएको बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ।